Sarrifka Lacagaha Qalaad Ee Magaalada Hargeysa Oo Suuq Madow Yeeshay Iyo Mooganaanta Xukuumadda |
Sarrifka Lacagaha Qalaad Ee Magaalada Hargeysa Oo Suuq Madow Yeeshay Iyo Mooganaanta Xukuumadda
Tan iyo intii ay xukuumadda Somaliland go’aamada kasoo saartay qiio jabka ku dhacay lacagtii Somaliland ee “Shilling Somaliland” waxa magaalooyinka ka bilaabmay suuqa madow oo aan hore u jirin isla markaana keenay in sarrifka lacagaha gaar ahaana gacanta danbe ay hawada isku shareerto .
Xukuumadda ayaa go’aamada ay soo saartay waxa kamid ahaa in sarrifka isku badalka lacagta dollarka iyo Shilling Somaliland aanu dhaafi Karin gacanta hore 6800 oo Somaliland Shilling ah gacanta danbena aanu dhaafi Karin 7000 (Todoba Kun ) oo Shilling Somaliland ah.
Hase’yeeshee gacanta labaad oo ah marka aad lacagta Shilling Somaliland-ta ah haysato oo aad u baahan tahay Dollar ma heli kartid hadii aad heshana suuqa madow ayaa laguugu sarrifayaa iyada oo laguugu dhufanayo qadarkii ay markii hore joogtay 100$ oo ahaa 800,000 (Sideed Boqol oo Kun).
Sidoo kalena ganacsatada bakhaaradda maceeshadda ku iibiya ayaa marka aad rabto inaad maceeshad ka iibsato waxay kuug dhufanayaan gacanta danbe iyaga oo kuu xiisaabinaya 700,000 (Todoba Kun) taas oo dad badan aanay fahansanayn.
Dhanka kale sarriflayaasha ayaa iyagu marka aad wadato lacagta Somaliland ee aad doonayso dollar kuu sheegaya inaanay hayn lacagta Dollar-ka balse marka danbe ku odhanaya qadarkii hore Ayaan kugu siinaynaa tusaale ahaan hadii aad doonayso dollar waxa ay kuu sheegayaan in 100$ (Boqolka Dollar) ay kugu badalayaan 800,000 (Sideed Boqol oo kun ) oo shilling Somaliland ah,iyaga oo marka aad dollar sidatana kuugu sarrifaya qiimihii ay xukuumaddu go;aamada kusoo saartay.
Suuqyadan madow ee lagu kala badalanayo lacagaha ayaanay xukuumaddu ka war hayn iyaga oo dhanka kalena la la yahay meel ay martay lacagtii qalaad ee dollarku.